Ny antony ny hevitra toy izany
ny rafitra efa lany andro sy tsy mahalala izay tokony hatao amin’ny ny fifamoivoizana sy ny mpampiasa ny tranonkala. Ezaka mba hamelona indray ny vohikala toa tsy ho afaka. Toy izany koa ny kasety rehefa ny fizarana nitsangana ary ankehitriny dia tsy nisy endri-javatra amin’ny namany sary. Ny fanontaniana tsy niova hatramin’ny ny fototra (eo amin’ny taona lasa izay) dia lany andro sy tsy ilaina ary amin’ny Ankapobeny ny vohikala dia niova indray mandeha ihany. Ny mpijery ny tranonkala dia tsy maka anjara amin’ny fampandrosoana ny toerana (raha misy). Toa ny ray ny mpanorina farany navadika ho»Lehibe ny Fiarahana»ary nandao ny tetikasa.
Inona no mikasa ny hanao.
Voalohany mba hanova ny endrika. Avy manokana ny tahirin-kevitra mba handeha ho any amin’ny endrika mahaliana. Izany hoe, mba hamantarana ny mpampiasa ny tombontsoa, manasa azy ireo mba hameno ao amin’io dikan ny fanontaniana. Mifidy ny sarimihetsika, ny mozika, ny boky, ny Fialam-boly izay tianao (avy amin’ny — safidy ao amin’ny sokajy tsirairay). Manaraka, manao kajy ny antontan’isa ary manolotra mpampiasa amin’ny avo rating hifanindry dia nampidirina. Dia ho ny lohahevitra momba ny resaka, fara fahakeliny. Bebe kokoa, maro ny fijerena izay azo atao. Na izany aza, toy ny fototra izany dia mety ho tena mahaliana.
Lalao eo amin’ny toerana.
Afaka hihaona milalao
Safidy fanontaniana valiny sns.
Eo amin’ny lafiny monetization dia nomanina mba mifandray amin’ny Aterineto, ary dia toy izany ny tranonkala dia ho tsara tarehy amin’ny ampy fanononana tsy ampy ny fandaharana affiliate. Jereo ny tranonkala ny fividianana no ho fidiram-bola. Toy izany koa ny fividianana amin’ny tranonkala dia ho ny vola miditra. Ankoatra ny fivarotana an-tserasera, izay hotontosaina amin’ny asa sy ny lalao ara-tsosialy.
Fotoana iray hafa. Ankehitriny ny Mampiaraka toerana dia mafy lasa mifandray amin’ny firaisana ara-nofo Niaraka izay mihevitra aho fa disappoints maro mpampiasa. Izany dia nikasa ny hampiditra ao amin’ny vohikala sy ny sivana fitsipika, araka izay ny mpampiasa sy ny mpitantana dia hanasivana ny alalan ny mombamomba sy ny hafatra ihany ny firaisana ara-nofo natiora. Ny fandraràna ny fitsipika mba hanolotra ny firaisana ara-nofo ny tolotra ao amin’ny tranonkala eo ambany misy saosy. Ohatra, ny mpampiasa, indrindra fa ho an’ny tovovavy, ianao dia afaka marika ireo mpampiasa izay ireo ihany no liana amin’ny firaisana ara-nofo. Ny sasany mainty manamarika, raha tendrena lehibe ny mpampiasa dia mihidy. Ary ny mifanohitra amin’izany, manome toy izany no manamarika ny maha-mahaliana conversationalist, lehibe lehilahy, sns. Ny rafitra dia tena mitovy amin’ny new lamaody fironana ankehitriny amin’ny geo-tolotra, izay mpampiasa laharana (mpitandro filaminana, mpandalo, sns.).
Izay mila izany. Voalohany, ny developer sy ny mpamorona. Izany no tena tsara avy amin’ny Lahatsary amin’ny chat satria velona aho dia misy sy ny fifandraisana mety ho mora kokoa. Na izany aza, raha toa ianao ka mizara ny hevitra, vonona ny hanao sy vonona ny hifindra any amin’ny Lahatsary amin’ny chat, safidy io ihany koa ny horonan-taratasy. Traikefa.
Na dia ho an’ny sasany ny antony ny tetikasa dia tsy hanomboka. Misy hevitra hafa ary mikasa ny hanao Trano ho azy ireo na ahoana na ahoana. Noho izany aho mitady ny mitovy ny lava-teny ny fiaraha-miasa.
Hafa ny toe-javatra mitovy fomba fijery.
Tiako ny miara-miasa amin’ny mitovy
Ary farany, ny teny farany momba ny fampandrosoana ny fahafaha-miasa ho ahy.
Noho izany aho-dalam-pandrosoana
Fa ny mazava ho azy aho noho ny marimaritra iraisana eo amin’ny sasany ny olana manan-danja, zava-dehibe indrindra, ny marimaritra iraisana efa matetika loatra ny mijery ny, ka noho izany ny mampitovy ny fomba fijeriny, ary ny mpiara-miasa
nanadino, marketer, search engine optimization, ny tambajotra ara-tsosialy tena na dia heverina ho kandidà manatevin-daharana
← Maty ankizivavy tsy mandry (TV andian) - izao Tontolo izao ny Lahatsary Mampiaraka